एकाएक ह्वात्तै घट्यो मासुको मूल्य, अब किलोलाई कति ? — Sanchar Kendra
एकाएक ह्वात्तै घट्यो मासुको मूल्य, अब किलोलाई कति ?
काठमाडौँ । ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य एक सातामै तेस्रो पटक घटेको छ । शुक्रबारबाट लागु हुनेगरी ब्रोइलर जिउँदो कुखुराको मासुको कोल्डस्टोर मूल्य २० रुपैयाँले घटेपछि तयारी मासुको मूल्य ३८० रुपैयाँमा झरेको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले जनाएको छ ।
काठमाडाैंमा तरकारी १८९ प्रतिशतसम्म महंगियो
खरिद गरेको केही दिनसम्म ताजै रहने, छिटो नसड्ने र तरकारीमा स्वास्थ्यवर्द्धक गेडागुडी खोज्नेहरूले किन्छन् घिउसिमी । गत चैत ७ मा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्यसूचीमा लोकल घिउसिमी थोकमा प्रतिकेजी औसत ४५ रुपैयाँ थियो । मंगलबार वैशाख ७ मा यसको भाउ १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । राज्मा ७० बाट १ सय १० र हाइब्रिड घिउसिमी ४० बाट ९० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार बन्दा र मटरकोसाको मूल्य पनि होलसेलमै शतप्रतिशतले बढेको छ । हरियो फर्सी, हरियो धनियाँ, काउली, प्याजलगायत तरकारीको मूल्य पनि छोइनसक्नुभएको छ ।
होलसेलमै शतप्रतिशत वृद्धि हुँदा खुद्रामा पनि सोहीअनुसार मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने गरिएको छ । ‘केही दिनयता होलसेलमै बढेको छ । हामीले महँगोमा खरिद गरेपछि २/४ पैसा राखेर बेचिरहेका छौं,’ सुकेधारा तरकारी बजारका एक व्यापारीले भने, ‘महँगोमा खरिद भएपछि उपभोक्तालाई पनि बढी मूल्य पर्यो । प्रतिकिलो ८०/१०० रुपैयाँभन्दा कममा तरकारी पाउन मुस्किलै छ ।’
हरेक खुद्रा पसलमा मूल्य फरक–फरक छ तर केही खुद्रा व्यापारीहरूलाई मूल्य बढ्नुको कारण थाहा छैन । कालीमाटी तरकारी बजारले भने उत्पादनमै कमी भएको जनाएको छ । उत्पादन कमी र त्यसमाथि बिचौलियाको चलखेल हुँदा थप महँगो भएको हो ।‘तरकारीमा मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण आन्तरिक उत्पादनकै कमी हो ।
बजारमा हिउँदे तरकारी सकिएको छ । बर्खे तरकारी आउने बेला भएको छैन,’ समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘माग धान्न भारतबाट आयात भइरहेको छ । यसले गर्दा महँगी भएको हो ।’ समितिका अनुसार हाल भारतबाट दैनिक करिब ४५ प्रतिशत तरकारी भित्रिइरहेको छ । भारतबाट आए पनि बजारको मागका अनुपातमा पर्याप्त भने छैन । श्रेष्ठका अनुसार सामान्य अवस्थामा करिब दैनिक आठ सय टन भित्रिन्छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारले काठमाडौं उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्छ । तर अहिले सात सय टन हाराहारीमा मात्रै भित्रिएको छ । समितिका अनुसार २०७७ चैत ७ मा किलोको ४५ रुपैयाँ रहेको घिउसिमी हाल बढेर १४० रुपैयाँ, १२ रुपैयाँ पर्ने बन्दा बढेर ३३ रुपैयाँ, ७५ रुपैयाँ पर्ने मटरकोसा बढेर १५५ रुपैयाँ, २८ रुपैयाँ पर्ने हरियो फर्सी बढेर ५५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
होलसेल मूल्य ४५ रुपैयाँ पर्ने हरियो धनियाँ ८७ रुपैयाँ, ४७ रुपैयाँ पर्ने लोकल काउली बढेर ७५ रुपैयाँ, ५७ रुपैयाँ पर्ने प्याज हरियो ८७ रुपैयाँ, ६५ रुपैयाँ पर्ने काँक्रो बढेर ९० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै भेडे खुर्सानी, मुला, हरियो लसुन, बोडी, ब्रोकाउलीलगायत तरकारीको मूल्य बढेको छ । गोलभेंडा, रातो आलु र भन्टाको मूल्य भने घटेको छ ।